Ahiahiana fandehanana mafy :: Namono olona roa indray ny taksiborosy • AoRaha
Niharan’ny lozam-pifamoivoizana ny fiara iray taksiborosy marika « Mazda » tany amin’ny lalam-pirenena fahaenina, telo ambin’ny folo kilaometatra tsy hidirana an’Ambanja raha avy any Ambilobe, afak’omaly antoandro. Namoy ny ainy ny lehilahy lehibe sy vehivavy iray mpandeha tao anatiny. Olona am-polony no naratra niaraka tamin’ny mpamily. Potika tanteraka ny lohan’ny fiara.
Nivoaka ny lalana ity fiara fitaterana ity rehefa nandalo tao Antsakoamanondro Ambanja. Tombanana ho noho ny
fandehanana mafy no nahatonga izany, araka ny tatitra avy amin’ny mpanao famotorana. Nidona tamina hazo lehibe iray, avy eo, ny fiara. Ny lohany tandrify ny fipetrahan’ny mpamily no tena voa mafy. Naratra mafy tamin’izany ny mpamily izay voatery nosokirina avy tao anaty fiara. Notaomina namonjy ny hopitaliben’Ambanja ireo naratra.
Fotoana vitsy taorian’ny naha- tongavana teny, nindaosin’ ny fahafatesana ny olona roa, lehilahy iray, telo amby valopolo taona, sy vehivavy, roa amby efapolo taona.
«Afaka namonjy fodiana, tamin’ny harivan’io ihany, ny ankamaroan’ireo naratra. Noho ny dona mafy no tena nahavoa azy ireo. Tsy hitanay mivantana kosa ireo olona roa namoy ny ainy sy ny fahavoazana teny amin’izy ireo ka nitarika ny fahafatesany», araka ny fanampim-panazavana voaray.
Nisesisesy ny loza nihatra tamin’ny taksiborosy tany amin’ny lalam-pirenena, tamin’ity herinandro ity. Nisy tranga iray tahaka izao tany amin’ny lalam-pirenena faha-25 tany Manakara, tamin’ ny alarobia lasa teo. Maty tsy tra-drano tao anaty taksiborosy nifatratra tamin’ny vody hazo ihany koa ny zaza roa, efatra sy enin-taona. Maro ireo mpandeha naratra. Loza iray hafa ilay tany amin’ny lalam-pirenena fahafito, tamin’ny faramparan’ny herinandro lasa teo. Niharam-boina ny taksiborosy iray izay namoizana ain’olona roa.
Fanaparitahana laza adina bakalorea :: Naiditra am-ponja ilay talen’ny Ofisin’ny Bakalorea teo aloha
Lozam-pifamoivoizana :: Mpitondra môtô maty tsy tra-drano